နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄ | 2013 ၏စာမျက်နှာ3NAB သတင်းများ | 69 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2013 » နိုဝင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 3)
Wohler အမည်များအာရှပစိဖိတ်ဒေသကြီးအတွင်းရှိကုမ္ပဏီရဲ့စောင့်ကြည့်ခြင်းထုတ်ကုန်များအတွက်အရောင်း၏အန်ဒီ Stanton တို့ဦးခေါင်း
San Francisco - နိုဝင်ဘာ 26, 2013 - Wohler Technologies ကယနေ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသထဲမှာကုမ္ပဏီ၏စောင့်ကြည့်ရေးထုတ်ကုန်လိုင်းများအတွက်ရောင်းချမှု၏ဦးခေါင်းအဖြစ်အန်ဒီ Stanton တို့၏ရက်ချိန်းကြေညာခဲ့သည်။ အာရှပစိဖိတ်စျေးကွက်ဖြတ်ပြီး Wohler ကုန်သည်များနှင့်ပေါင်းစပ်ကွန်ယက်ကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်တိုးချဲ့နေချိန်မှာ Stanton တို့ Wohler ရဲ့တိုက်ရိုက်အရောင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုင်တွယ်ပါလိမ့်မယ်။ "အန်ဒီနှစ်ခုစလုံးလူသိများတဲ့နှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကောင်းစွာ-လေးစားသည် ...
နယူး HD ကို OB ယူနစ်များ၏နှလုံးမှာဦးဆောင်ဆွစ်ဇာလန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ EVP နေရာများ Snell Sirius 830 Router
Snell ယနေ့ EVP, ဆွစ်ဇာလန်အခြေစိုက်နာမည်ကြီးလွတ်လပ်သောထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခု Sirius 830 HD ကို-10, ကုမ္ပဏီအသစ် high-definition အပြင်ဘက်ထုတ်လွှင့် (OB) မော်တော်ယာဉ် onboard Snell ပစ္စည်းကိရိယာများ၎င်း၏အဖြည့်ရန်မျိုးစပ် router ကိုချီတက်ကဆက်ပြောသည်မူကြောင်းကိုကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ Sirius 830 router ကိုလည်း၎င်း module တစ်ခုအကွာအဝေးပါဝင်သောသစ်ကိုထရပ်ကား, အားလုံးကိုအသံနှင့်ဗီဒီယိုသွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များ switches ...
တိုက်ရိုက်ဒီဇိုင်း - SSL ကိုသြစတြေးလျမှာတော့တိုက်ရိုက် Console ဖြန့်ဖြူးပြီးတော့ ... အမျှ Amber နည်းပညာခန့်အပ်
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat, Daily သတင်းစာ EditionLive ဒီဇိုင်း SSL ကိုသြစတြေးလျမှာတော့တိုက်ရိုက် Console ဖြန့်ဖြူးထားသကဲ့သို့ Amber နည်းပညာခန့်အပ်ပြီးတော့ ... livedesignonline.com အပေါ်ကိုကြည့်ပါ
RTW Astro Productions မှအသံကျယ်လောင်စီမံခန့်ခွဲမှုပေး - တိုက်ရိုက်ဒီဇိုင်း
ထုတ်လုပ်မှု post, RTW, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အမြင်အာရုံအသံမီတာတစ်ဦးဦးဆောင်ရောင်းချသူ, ထုတ်လုပ်မှုနှင့် - Daily သတင်းစာ EditionLive ဒီဇိုင်း RTW Astro Productions တိုက်ရိုက်ဒီဇိုင်းမလေးရှားနိုင်ငံ, ကွာလာလမ်ပူ, နိုဝငျဘာ 25 2013 မှအသံကျယ်လောင်စီမံခန့်ခွဲမှုပေး, အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat - Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ... livedesignonline.com အပေါ်ကိုကြည့်ပါ
အဆိုပါ HOT ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများ!
SCRI ရဲ့မကြာသေးခင်က 2013-15 ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေး Trends အစီရင်ခံစာ 2013 အတွက်အသုံးပြုမှုနှင့်ဒေါင်လိုက်စျေးကွက်လိုလားသူဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူကျယ်ပြန့်အကြား ကျော်လွန်. အပူဆုံးနည်းပညာများခြေရာခံ။ သော့ချက်နည်းပညာများကိုအသုံးပြုသူများကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးနည်းလမ်းတွေပေးသောချွတ်ဖြစ်ကြ၏ဘယ်ရှိပါသလဲ 2013 မှာတော့ File ကို-based Workflows ကြည်လင်သောခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်, H264 / MPEG-4 အပိုင်း 10 အားဖြင့်အချို့သောလမ်းနောက်ကွယ်မှနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ကောင်းစွာအောက်ပါ ...
လေဆာရောင်ခြည်-based ဆက်သွယ်ရေး system ပေါ်တွင်ပြီးစီးခဲ့စမ်းသပ်ခြင်း - UPI.com
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း, Daily သတင်းစာ EditionExecutiveBiz (ဘလော့ဂ်) Beat စမ်းသပ်ခြင်းဒါဟာအစ www.upi အပေါ်နည်းဗျူဟာမြင့်မားသောအင်တင်နာတိုင် systems.See ဝယ်ယူနှစ်ယောက်အမေရိကန်မရိန်းတပ်သားများအကြားအချက်အလက် link ကိုထိန်းသိမ်းထားလေဆာ-based ဆက်သွယ်ရေးစနစ်က UPI.com အပေါ်ပြီးစီး .com
ကြိုးမဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံ: စျေးကွက်ဝေစု, မဟာဗျူဟာနှင့်ခန့်မှန်းချက်, Worldwide မှ ... - Newsday
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်, Daily သတင်းစာ EditionWireless အခြေခံအဆောက်အအုံမဂ္ဂဇင်း Beat: စျေးကွက်ဝေစု, မဟာဗျူဟာနှင့်ခန့်မှန်းချက်, Worldwide မှ ... Newsday အဲဒီနည်းပညာတွေပြန်ဖိုက်ဘာအမာခံမှခြေရင်းဘူတာမှအများကြီးပိုမိုမြင့်မားစွမ်းရည်မောင်းနှင်နေကြသည်။ ဖိုင်ဘာ core ကိုပံ့ပိုးပေးမယ့်အပေါ်အလွန်အမင်းဖိအားပေးနေသည် ... www.newsday.com အပေါ်ကိုကြည့်ပါ
Winchester ကအီလက်ထရောနစ်ကော်ပိုရေးရှင်း ... Haverhill ၏သိမ်းယူမှုကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ် - စီးပွားရေးကြေးနန်း (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)
www အပေါ်၎င်း၏ထုတ်ကုန်စီးပွားဖြစ်, စစ်ရေးအတွက်မိုက်ခရိုဝေ့နှင့် RF စနစ်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်) စီးပွားရေးကြေးနန်း ... နေ့စဉ် EditionWinchester အီလက်ထရောနစ်ကော်ပိုရေးရှင်း Haverhill ၏သိမ်းယူမှုကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်, အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat နှင့်ဂြိုဟ်တု equipment.See - Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ .businesswire.com
3 ၏စာမျက်နှာ 69«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»